Momba anay - Xuzhou Tianqi Mining Technology Co., Ltd.
Tongasoa eto amin'ny toeram-pivarotana harena ankibon'ny tany
Inona ny boaty fitrandrahana?
Nanomboka tamin'ny 31 Oktobra 2008, ID Satoshi Nakamoto dia nampiasa taratasy sivy pejy mba hamoronana ny mitovy amin'ny iray tapitrisa tapitrisa yuan Bitcoin amin'ny rivotra manify. Nanomboka teo, tamin'ity tamba-jotra tsy fantatra anarana tsy voafaritra ity dia nisy valiny voarindra ho an'izay rehetra mamaly ny valiny araka ny paikadin'ny marimaritra iraisana PoW: Proof-of-work ary izy no voalohany nahavita ilay teboka fonosana sakana. Ny valisoa dia 12,5 bitcoins ankehitriny, na $ 85,000 eo ho eo. Ity dingana fantatra amin'ny anarana hoe "mining" ity.
Ny toetran'ny asa-porofo-miasa dia tanteraka. Ny fahafaha-matanjaka kokoa amin'ny fikirakirana ny fitaovanao dia ny fahafaha-manao kajy ny valiny. Tany am-piandohana dia nampiasa CPUs sy GPU ireo mpitrandraka mba hitrandrahana manokana. Miaraka amin'ny fitomboan'ny herin'ny kaonty, nipoitra ireo dobo fitrandrahana izay manangona herin'ny computing betsaka an'ny olona. Ny dobo fitrandrahana harena ankibon'ny tany dia manana vintana bebe kokoa amin'ny fanaovana kajy ny valiny sy hahazoana valisoa, amin'izay samy mahazo ny valisoa ary nitombo koa ny fizarana. Nandritra izany fotoana izany dia nipoitra ihany koa ny olana: ： mpitrandraka mpitrandraka maro be mifangaro, izay mamokatra sy mamoaka feo sy hafanana marobe, fanjifàna herinaratra goavambe. Misy olana lehibe dia sarotra ny mitondra, satria be loatra ny mpitrandraka sy ny zotra fampitaovana. Teraka àry ilay boaty mpitrandraka.
Ny tanjonay dia ny hamorona rafitra ara-bola misokatra ho an'izao tontolo izao.
Ity kaontenera fitrandrahana containerized ity dia manome mpitrandraka vahaolana mahomby kokoa noho ny fitrandrahana trano fanatobiana entana. Ny ampahany lehibe amin'ny vidin'ny fitrandrahana cryptocurrency dia avy amin'ny fandaniana herinaratra sy ny vidin'ny trano fitehirizana. Ireo kaontenera mitrandraka anaty kaontenera dia azo entina mora foana any anaty kamio ary entina any amin'izay tianao aleha miaraka amin'ny herinaratra ambany. Tsy ferana amin'ny tranokala izy io, ary manana fivezivezena mahery, ary mahomby ary koa azo averina.
Tianqi Mining dia namarana ny tantara taloha tamin'ny fanaovana boaty fitrandrahana miaraka amina fitoeran-javatra. Mampiasa vy maivana vaovao hamokarana boaty fitrandrahana, hahatonga azy ireo maharitra sy maivana kokoa. Ho fanampin'izany, nanangana kaontenera fitrandrahana cryptocurrency izahay izay afaka mampiantrano ny mpitrandraka ASIC na ny GPU hihaona amin'ny filan'ny mpanjifa tsirairay. Raha mila kaontenera 40 metatra ianao, boaty fitrandrahana namboarina manokana, na karazana fitakiana manokana, ao Tianqi, dia hisy ny fangatahana rehetra. Tamin'ny taona 2020, ny boaty fitrandrahana vao azo esorina sy ny boatin'ny fitrandrahana vita amin'ny alàlan'ny solika dia nalefa ary nampiasain'ny customer.
"Izahay dia orinasa manampahaizana manokana amin'ny serivisy bitika indrindra an'ny Bit-coin. Mizara sokajy roa ny orinasany: mamokatra famaritana isan-karazany ny boaty fitrandrahana finday, manome ny masinina fitrandrahana faharoa ambany noho ny vidin'ny tsena"
Hi! Tianqi Mining io. Izahay dia orinasa manokana amin'ny famokarana sy fivarotana boaty fitrandrahana finday cryptocurrency ary milina fitrandrahana ampiasaina. Manana orinasam-pamokarana sahabo ho 3.000 metatra toradroa izahay, mamokatra sy manondrana famaritana isan-karazany ny boaty fitrandrahana finday takian'ny mpanjifa ao Xuzhou China. Afaka manamboatra boaty fitrandrahana arakaraka ny fangatahan'ny mason'ny mpanjifa izahay. Mazava ho azy, manana boaty fitrandrahana finday marobe koa izahay izay ampiasaina amin'ny tsena sinoa amin'ny tahiry. Tongasoa eto hitsidika ny orinasa! Manome serivisy fametrahana sy fikolokoloana eo an-toerana ihany koa izahay araka ny filanao. Raha fintinina, hanome anao vahaolana feno i Tianqi ho an'ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fitrandrahana cryptocurrency,
Manintona tompona toeram-pitrandrahana sinoa maro sy mpitrandraka vaventy ny loharanon-tsika manokana, mba hahafahanay mahita mora foana ny loharanon-karena amin'ny tanana faharoa amin'ny vidiny ambany indrindra. Noho izany, manana tombony ampy izahay mahita ny milina fitrandrahana ilainao amin'ny tsenan'ny milina fitrandrahana. Manome toky izahay amin'ny voninahitry ny orinasanay: ny masinina mitrandraka Bit-coin rehetra alefanay dia voasedra amin'ny ekipanay manokana, ary afaka miantoka ny fiasan'ny milina fitrandrahana tsirairay izahay.
kaontenera antbox, kaontenera antminer, btc fitoeran-javatra, crypto mining asic, fitaovana fitrandrahana crypto, fitoeran-javatra bitmain,